Sesitany an'i Bahá'u'lláh.
Nananao ny toriteniny tamin' ny alalan' ny fanoratana boky i Bahāʾ-Allāh ka ny tena manan-danja indrindra amin' izany dia nosoratany tao amin' ny fonjan' i Acre, dia ny Kitāb-i Aqdas ("Boky Masina indrindra"). Tao Edirne tamin' ny taona 1868 dia nandefa ny hafatra voasoratra ho an' ireo mpitondra malaza tamin' ny androny izy, isan' izany ny shah tao Iràna, ny tsar Alexadre II tao Rosia, ny mpanjakavavy Victoria tany Angletera, ny emperora Guillaume I, i Napoléon III ary ny papa Pio IX, izay namporisihiny hametra ny fitaovam-piadiany sy hanao izay hahatanteraka ny fandriampahalemana ho an' ny rehetra sady maharitra ary mahenika an' izao tontolo izao. Tany an-tsesitany sy tany am-ponja no nandanian' i Bahāʾ-Allāh ny efapolo taona farany niainany. Tamin' ny volana Aogositra 1868 hatramin' ny 1877 dia nohidiana tao amin' ny tanàna torka fanidiana voafonja tao Acre akaikin' i Haifa izy. Avy eo dia nonina tao ivelan' izany tanàna izany tany ambanivohitra izy, tao amin' ny trano antitra tao Bahjī, izay nahafatesany sy nandevanana azy tamin' ny 29 Mey 1892. Ao no toeran' ny qibla ho an' ny mpino bahay, toerana itodihan' ny Bahay rehefa manao ny vavaka tsy maintsy atao (ṣalāt).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Baháʼu%27lláh&oldid=1044584"
Voaova farany tamin'ny 14 Aprily 2022 amin'ny 14:31 ity pejy ity.